China round link cheni fekitari uye bhizimisi | Chigong
Chikamu: denderedzwa chinongedzo cheni, denderedzwa simbi chinongedzo cheni, denderedzwa chinongedzo chekuchera cheni, DIN 22252 yekuchera cheni, kuchera conveyor cheni, kubhururuka bar cheni system
Round link cheni, denderedzwa simbi yekubatanidza cheni, denderedzwa yekubatanidza mugodhi cheni, DIN 22252 mugodhi cheni, mugodhi conveyor cheni, ndege bhaa cheni hurongwa
Armored Face Conveyors (AFC), Beam Stage Loader (BSL), michina yemusoro wemigwagwa, gejo remarasha, nezvimwe.
SeNyika 1 yemarasha inogadzira nyika, China yakaona kudiwa kwehukuru hwakawanda kutenderera chinongedzo chekuchera macheni, uye nekudaro ichikurudzira China yakakomberedza simbi yekubatanidza cheni yekugadzira kugona maererano nehuwandu uye mhando. Fekitori yeketani yeSICIC iine makore makumi matatu kutenderera simbi yekubatanidza ngetani yekugadzira nhoroondo yave ichinyatso kubatanidzwa muChina marasha indasitiri yekupa; denderedzwa redu rekubatanidza ngetani zvakagamuchirwa kusvika zvino uye zvinoshandiswa nemakambani ese emarasha & emigodhi kuburikidza neChina.
Yedu yakatenderera simbi yekubatanidza cheni mhando inochengetedzwa kuburikidza nhanho imwe neimwe yeketani yekugadzira, kubva kuruzha chiwanikwa simbi mabara kune chaiwo kubatana kwekunyepedzera ne robhoti, kubva kumakomputa flash butt kusungira kune yakagadzirirwa yakagadzirirwa kudzima & tempering kupisa-kurapwa (zvichikonzera kunodiwa simba uye pamusoro kuomarara) , kubva kuumbowo bvunzo kusvika kumuchina bvunzo pakuongorora kwepamusoro & yemukati mhando.
SCIC denderedzwa yekubatanidza cheni inoitwa zvinoenderana neChina GB / T-12718 yakajairwa uye fekitori technical Zvinodiwa, pamwe neDIN 22252 kana GOST 25996 zviyero uye vatengi specs
SCIC denderedzwa yekubatanidza cheni inoshandiswa kune Armored Face Conveyors (AFC), Beam Stage Loader (BSL), michina yemusoro wemigwagwa, magejo emarasha nemimwe michina inoda rudzi urwu rwecheni.
anti-corrosive coatings (semuenzaniso, inopisa yakanyoroveswa galvanization) inokonzeresa kudzikira kwecheni michina zvivakwa, nekudaro kushandiswa kwechero anti-kunokanganisa kupfeka kunozotungamira kurongeka chibvumirano pakati pemutengi uye SCIC.
Mufananidzo 1: denderedzwa yekubatanidza cheni
Tafura 1: denderedzwa yekubatanidza cheni zviyero
saizi yekubatanidza (opp. Weld)
chinongedzo weld saizi
makirogiramu / m (~)
zvinyorwa: Larger saizi cheni inowanikwa pane kubvunza.
Saizi yekubatanidza (d) inoyerwa pa link yakanangana opposaiti chinongedzo weld.
Batanidza upamhi (b1 & b2) kuyerwa kubva pairi chinongedzo weld.
Tafura 2: yakakomberedza chinongedzo cheni yemuchina zvivakwa
Kureba pasi pekuedzwa kwesimba
42 x 137
Pashure: ChiChinese Wholesale Kubvuta Kuvharira Chain - Conveyor uye erevheta macheni - Chigong
Zvadaro: flat link cheni
4 Gumbo Kusimudza Maketani
Maketani Uye Zvipfuramabwe
Crane Kusimudza Maketani
Ngoma Kusimudza Maketani
Kubata Mambure Maketani
Kusimudza Maketani Osha
Twin Maketani Ndege Bhawa